भोलि वर्षकै पहिलो शनिवार ! तपाइको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल !
बैशाख ०६, २०७६ PS
bholi मिति बिक्रम संवत २०७६ साल बैशाख महिनाको ७ गते शनिवार तदनुसार सन् २०१९ अप्रिल २० तारिख तपाईको दिन कस्तो रहला ,हेर्नुहोस तपाईको bholiको राशिफल
व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा अधिक लाभ हुने सम्भावना रहेको छ। प्रियजन संगको भेटघाटले मन रमाउने छ। दाम्पत्यजीवनमा खुसियाली छाउने छ। आर्थिक लाभ तथा यात्राको सम्भावना रहेको छ। प्रतिष्पर्धात्मक कार्यमा सहभागी नहुदा नै राम्रो हुनेछ।
अधुरा रहेका कार्यहरु निर्धारित समयमा नै सम्पन्न भएर जानेछ। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। आर्थिक लाभ भएर जानेछ। स्वास्थ्यमा सुधार भएर जानेछ। नोकरी व्यवसायमा लाभ हुने छ। सहकर्मीको उचित साथ र सहयोग मिल्नेछ।
सन्तान तथा जीवनसाथीको स्वास्थ्यमा समस्या आउने छ। अनावश्यक बादबिवादमा सामेल नहुदै उचित्र हुनेछ। नया कार्यको थालनी सकेसम्म नगर्दा नै राम्रो होला। यात्राको लागि समय अनुकुल छैन। पेट संग सम्बन्धित समस्याले सताउने छ।
स्वास्थ्य सामान्य रहेको छ। छातीमा समस्या आउने छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा मान हानि हुने सम्भवना रहेको छ बिशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने छ। अनिन्द्राको अनुभव हुनेछ। अनावश्यक रुपमा खर्चको मात्रामा वृद्धि भएर जानेछ।
कार्यमा सफलता मिल्नेछ।प्रतिस्पर्धात्मक कार्यमा विजय हासिल गर्न सकिने दिन रहेको छ। दाजु भाईको सम्बन्धमा मेलमिलाप हुनेछ। स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। भाग्योदय्को योग रहेको छ। आर्थिक लाभ हुने सम्भावना रहेको छ। समग्रमा तपाईको bholiको दिन शुभ रहेको छ।
बोलीको प्रभाव बढेर जानेछ। पारिवारिक वातावरण सुखमय बित्नेछ। स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ। मनोरन्जनात्मक कार्यमा दिन व्यतित हुनेछ। बिद्यार्थी वर्गका लागि पढाई लेखाइमा सफलता मिल्नेछ।
महत्वपूर्ण कार्य हात लागि हुने छ। स्वास्थ्य अनुकुल रहने छ। आर्थिक लाभको सम्भावना रहेको छ। मनोरन्जनात्मक कार्यमा दिन बित्ने छ। स्वादिष्ट भोजनको अनुभूति हुनेछ। कार्यमा सफलता मिल्नेछ। प्रियजन संग भेटघाट हुने छ। दाम्पत्य सुख मिल्नेछ।
मानसिक चिन्ता तथा शारीरिक थकानको अनुभव हुने छ। अनावश्यक दुर्घटना हुनबाट बच्नु पर्ने छ। बादबिवाद सकेसम्म सामेल नहुनु होला। सार्वजनिक क्षेत्रमा मान हानी हुने सम्भावना रहेको छ। खर्चको मात्रा बढेर जानेछ। मनोरन्जनात्मक कार्यको पछाडी खर्च हुनेछ।
आर्थिक , सामाजिक एवम पारिवारिक क्षेत्र लाभदायक रहेको छ। इष्टमित्रका साथमा घुम्न जाने अवसर मिल्नेछ। सन्तान सुख मिल्नेछ। सुखद वैवाहिक योग पनि रहेको छ। आयमा वृद्धि तथा व्यापार व्यवसायमा लाभ हुनेछ। स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ।
व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ। यात्राको लागि उचित समय रहेको छ। कार्यमा उच्च पदस्त व्यक्तिको भरपुर साथ् र सहयोग मिल्नेछ। पदोन्नतिको योग रहेको छ। पिताको तर्फबाट लाभ मिल्नेछ। मान प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ।
स्वास्थ्यमा बिशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने छ। शारीरिक स्फुर्तिमा कमि आउने छ। कार्यमा सोचे अनुरुपको सफलता मिल्ने छैन। विदेशस्थित आफन्तमार्फत सुभ समाचार सुन्न पाइने छ। प्रतिष्पर्धात्मक कार्यमा सकेसम्म सहभागी नहुदा नै उचित हुनेछ। समग्रमा कुम्भ राशी हुनेहरुका लागि bholiको दिन सामान्य रहेको छ।
स्वास्थ्यमा बिशेष सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। दैनिक कार्यमा ढिला सुस्ती हुनेछ। पारिवारिक झैँ झमेलाको सामना गर्नु पर्ने छ। आकस्मिक धन लाभको सम्भावना रहेको छ। आध्यात्मिक कार्यमा मन जानेछ।इश्वर भक्तिभावमा लाग्नाले बिशेष लाभ हुने देखिन्छ।
प्रकाशित : शुक्रबार, बैशाख ०६, २०७६१४:४१
आज वैशाख ९ गते ! तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् आजको राशिफल !